Huawei akange ari mumapepanhau akawanda muna 2019. Kambani yakaunza mamwe mafoni mahombe mune kufarira kwe P30 Pro pakutanga kwegore iro, ndokuteverwa ne Mateo 30 Pro pakupera kwegore.
Zvinosuruvarisa hazvo, zvakakura seMate makumi matatu akateedzana, izvi ndizvo zvekutanga zvigadzirwa kuti zvisanganiswe Hondo yekutengeserana yeUS kuChina, kuvhura pasina kuwana masevhisi eGoogle. Izvo zvaive uye zvichiri dambudziko.
Izvi zvinoreva chii nezveHuawei P40 uye P40 Pro? Izvi handsets zvicharamba zvichitangisa kuUK neEurope- uye chii chatingatarisira kubva kwavari kana vakaita? Hezvino zvese zvatinoziva kusvika zvino ...
Huawei P40 kuburitsa zuva uye mutengo
26 Kurume 2020 online kuvhurwa kwakasimbiswa
14:30 CET / 13:30 GMT nguva yekutanga
Huawei akasimbisa kuti mutsara weP40 uchatangwa musi wa 26 Kurume 2020.
Pakutanga izvi zvakakonzerwa nekuve pachiitiko muParis, sekusimbiswa zvakananga kubva kuna Richard Yu, CEO weHuawei Bhizinesi Group, panguva yechiitiko chekambani iyi online panzvimbo yenharembozha yavo yeWorld World Congress.
Nekudaro, kubvira ipapo, nekuda kwesimiro yepasi rose yeCOVID-19 kutya, yakachinjirwa chiitiko chepamhepo-chete chekutenderera. Saka hapana chiitiko cheParis che2020.
Panyaya yemitengo, iyo P30 yakatanga pa- $ 699, nepo P30 Pro yatanga pa- $ 899. Isu hatizoshamiswe kuona iyo P40 neP40 Pro zvakatenderedza mitengo yakafanana neyevafanogadzwa, kana zvisiri zvishoma.
Kune zvakare runyerekupeve kuti ive P40 Pro Premium Edition, iyo inogona kusundira mumitengo yepamusoro. Isu tiri kuverenga izvi sekumira-mukati meiyo yakajairwa Kuronga Dhairekitori, iyo yatisingazive kana isu tichigona kutarisira kuenderera.
Metal uye girazi magadzirirwo
In-kuratidza zvigunwe zvigunwe scanner
Kubhururuka Display, hapana kumucheto bezel
Takaitirwa kune mashoma dhizaini ekutsiva iyo P40 Pro - kubva @OnLeaks, @evleaks, uye Android Headlines - inotipa fungidziro yakanaka yezvatingatarisira kubva kuP40 Pro. Huru dhizaini dhizaini rakadudzwa kamera chikamu mukona kumashure, yakafanana neyaSamsung Galaxy S20 akateedzera.
Kunze kweavo vechitatu-bato Leather, isu zvakare yakatobata runhare mumusangano wepamutemo naHuawei. Nekudaro, izvi zvaive mubhokisi rakavanzika, kureva kuti isu taingokwanisa chete kunzwa foni, kwete kunyatsoiona. Asi izvozvo zvakaratidza zvimwe zvinonakidza zvakadaro.
Huawei achaita kushandisa kwayo Horizon Display paP40 Pro, achiputira pamusoro pemucheto wefoni. Tazvinzwa izvi mumunhu, nepo mutambi wechiitiko chekusvitswa achienderera mberi nekubatsira kusimbisa izvo, sezvakaita P40 Pro kuvuza inoonekwa musango kuChina.
Izvo zvinotaurwazve kuti kuchave neiyo ceramic vhezheni. Huawei akasimbisa kuna Pocket-lint izvo iyo inogona kushandisa zvishandiso zvitsva. uye kubhururuka kwemamwe manomwe mavara akapera inopa pfungwa yekuti pearlcentcent iyi ipedze.
Isu takaona iyo yenguva dzose P40 ichibuda mumadiridziro uye ichi chinotaridzika kunge chine flatter chinoratidzwa - sezvakaita the P30 yakajairwa vakaita chizvarwa chekupedzisira - zvakare kudhirowa kunze kwemisiyano pakati pemafoni maviri aya / matatu.
Iko hakuna 3.5mm yemusoro musoro masokisi uye hapana chiratidzo cheimwe chigunwe scanner, saka inowanzove inogona kuve iri pakuratidzwa pamidziyo yese.
OLED kuratidzwa, 120Hz zororo zororo
Punch hole mapatya maviri kamera yekumberi
P40 Pro: ~ 6.5-6.7 inches
P40: ~ 6.1-6.2 inches
Iyo Huawei P30 uye P30 Pro vese vane Full HD + resolution pane yavo OLED kuratidza. Inotaridzika seyawe Huawei P40 Pro ichave ichifamba kuenda kuQuad HD + OLED kuratidzwa, ine saizi yeimwe nzvimbo pakati pe6.5 kusvika 6.7-inches - zviyero chaizvo hazvizivikanwe parizvino, asi zvirokwazvo igadziriso yakakura. Izvi zvichave a Kukwikwidza Kuratidzira, yakakomberedzwa pamucheto wese. Isu tinofunga iyo P40 Pro Premium Shanduro ichave neyako kuratidza, pane kuve ichiri yakakura dhizaini.
Izvo zvinonzi iyo P40 ichave 6.1 kusvika 6.2-inches uye inokwanisika kuve yakapfava, chimwe chinhu chakasimbiswazve nemadiridziro ekugadzira. Pane mukana wekuti izvi zvakare zvichave OLED, asi ive yakazara HD + kugadzirisa.
Zvinotendawo zvakanyanya kuti P40 neP40 Pro vachawana maviri maviri pamberi kamera, vachishandisa gomba pombi pakuratidzira, isina notch nguva ino kutenderera. Kuona kweruzhinji kwefoni zvinoita kunge zvinoronza izvi.
Huawei P40: Katatu Leica system
Huawei P40 Pro Proum Edition: Penta Leica system
Parizvino isu tangove nerunyerekupe uye rwakananga-kubva-Huawei cryptic chikafu nezve izvo P40 yakatevedzana ingangopa. Izvi zvinosanganisira Sony IMX686 sensor, rudzi rutsva 64-megapixel sensor, uye periscope telephoto kamera inopa 10x Zoom. Nekudaro, mishumo inosiyana pane sensor iri shure kweiyi 10x telephoto, vamwe vachiti ndeye 16-megapixel sensor uye vamwe vachiti ndeye 8-megapixels.
Iyo Huawei P40 inotarisa kunge iri kuwana katatu kamera system, yakavakirwa pakatarisana nekamera huru, Ultra-wide uye telephoto. Hatizive zvakawanda zvakawanda pamusoro peiyi sarudzo yemakamera, asi inogona kurongedza mune 64-megapixel main sensor, 20-megapixel Ultra yakafara uye 12-megapixel zoom.
Iyo Huawei P40 Pro ichave nemakamera mana kumashure, ichiwedzera mune periscope zoom inokupa iwe 5x zoom - kana kuti 125mm sezvaive yakanyorwa kumashure kwefoni, izvo zvine musoro svika kaashanu iko kweiyo 25mm main sensor. Iyo kamera yekuwedzera ingangodaro nguva-ye-kubhururuka (ToF) yekudzika kwekuonekwa.
Iyo Huawei P40 Pro Premium Edition yakaonekwa iine makamera mashanu kumashure. Muchiitiko ichi, inoratidzika sekutarisa kureba pane periscope zoom ndeye 240mm, saka 10x, ichigadzira izvi zvakasiyana kune yakajairika P40 Pro. Iyo yechishanu kamera inogona kunge iri macro, yakava maitiro ekuwedzera mukati me2019.
Takaibata pamwe nePro kana iyo Premium mumunhu uye tinokwanisa kusimbisa iyo kamera kamera kutenderera kaviri pahurefu hweiyo paP30 Pro, nekudaro mutsara weiyo kamera inokwanisa kugarwa.
Kupesana neruzivo kwakaratidza Huawei achashandisa tsika 52-megapixel sensor. Panguva ino isu takamirira chaizvo rumwe ruzivo kuti tipe mhinduro chaiyo.
Dzorera kushandiswa kusina wireless
Huawei inogadzira zvayo machipisi saka iyo P40 neP40 Pro hapana mubvunzo inomhanyisa pane ichangoburwa yeKirin processor - Kirin 990 - yakafanana neiyo Huawei inoshandisa muna Mate 30.
Isu tinotarisira kuti ichave iripo mune 4G uye 5G sarudzo, chimwe chinhu chakanyanya kusimbiswa neTENNA chitupa, asi chakasimbiswazve neHuawei kuti chichava 5G ruoko.
Isu tinotarisira kuona yepamusoro-svinu yemagetsi ichachaja paP40 Pro, nerunyerekupe rwekuti Huawei ane itsva 50W system. Isu tinotarisirawo kuona dzosera waya isina waya.
Iyo bhatiri inonzi ndeye 5,500 XNUMXmAh. Nekudaro, isu tinotarisira kuti zvisiyane pakati pezvanza zviviri zvakakosha, zvakapihwa saizi dzakasiyana.
Software: Zvishandiso zveGoogle?
Ndiwo iwo mamirioni emubvunzo mubvunzo: iyo P40 neP40 Pro inopa Google masevhisi uye masevhisi? Panguva ino, isu hatitarisiri.
Kurambidzwa kweGoogle, inokonzerwa nehondo yeUS-China yekutengeserana, yave munzvimbo kwenguva yakati zvino uye Huawei akafambira mberi nemamwe mhinduro dzawo. Huawei Nhare Nhare, kana HMS, inovavarira kupa vanokwikwidza kuGoogle, vachitendeukira kumakambani akaita seTomTom yekugadzira. Huawei aenda kure kutaura kuti kunyangwe kurambidzwa kuchisimudzwa, iko zvino kwaizoenderera pasina Google.
Chimwe chinoratidza kuti Huawei akakosha nezvekuenda kwake ega kuti Mate 30 yatengeswa kuUK. Izvi zvaive mu limbo mushure mekutangwa, asi ikozvino zvinoita kunge zvauya kumusika, chiratidzo, pamwe, kuti Huawei afunga mafambiro. Nekudaro, isu tinotarisira zvizere kuti UK neEuropean kutanga kweHuawei P40 uye P40 Pro uye isu taizotarisira Google kuti isabuda pamufananidzo.
Zvakare Zvinonzi izvo Huawei, Xiaomi, Oppo uye Vivo vari kushanda pamwe chete pane imwe mbichana App chitoro kukwikwidza neGoogle Play.
Isu tinoziva zvakare kubva mukukurukurirana neHuawei kuti inotarisira kufambisa mazana evashandi kuLondon kuti vashande paHMS.
P40 uye P40 Pro runyerekupe: Chii chakaitika kusvika ikozvino?
Iwe uchawana chero runyerekupe rwakakomberedza P40 uye P40 Pro pano uye kana vachinge vaoneka.
17 Kurume 2020: Musangano wekutanga nguva kusimbiswa
Izvo zvakasimbiswa kuti rukova rwekutanga rwunotanga na13: 30 GMT musi wa 26 Kurume. Ndiko 14:30 CET, 05:30 PDT, 08:30 EDT.
16 Kurume 2020: 7 ruvara runopedzisa kubuda
Kuburitswa pane Twitter inoratidza iyo P40 Pro mumhando dzakasiyana-siyana dzekupera kwemavara.
10 Kurume 2020: Huawei inovimbisa P40 yekutanga chiitiko ichave online chete
Nekuda kweCOVID-19 kubuda, Huawei anayo vakasarudzwa kutanga chirongwa cheP40 mumutambo wepamhepo-chete, kwete muParis sezvairongwa pakutanga.
10 Kurume 2020: Huawei inoregedza Pocket-lint kuenda-neP40 Pro
We yakanyatsobata iyo yepamusoro-yekupedzisira P40 inobata ruoko, asi mubhokisi rakavanzika pane kunyatsozviona. Zvakabatsira simbisa zvinoverengeka zvezvinhu hazvo.
24 Kukadzi 2020: Huawei akasimbisa P40 kuvambwa kwemusi wa 26 Kurume
Huawei akadaro chakasimbiswa zviri pamutemo kuti iri kutanga chirongwa cheP40 musi wa 26 Kurume, ichiti "ndiyo yakanyanya simba pasi rose 5G flagship smartphone".
19 Nyamavhuvhu 2020: Huawei P40 uye P40 Pro 5G zvitupa zvinoonekwa, kuswededza pedyo
Iyo Huawei P40 uye P40 Pro inonzi akapfuura kuburikidza neTENNA, chitupa chekuzivisa muChina, uye chimwe chinhu chakasimbisa kuti michina iyi iri pedyo nekutanga. Izvi zvakare zvinosimbisa mamiriro e5G emafoni aya.
17 Kukadzi 2020: Huawei inogona kutakura P40 nhepfenyuro ine 52MP kamera sensor
Iyo Huawei P40 zvinogona kuuya ine yakajairika 52-megapixel sensor, nechinangwa chegumi nematanhatu kusanganisa saizi yakaenzana ne16µm.
22 Ndira 2020: P40 Pro inoonekwa musango
Haisi kungopa chero imwezve, se mifananidzo yeiyo yakacheneswa P40 Pro musango akaonekwa pane Chinese nzvimbo Weibo. Mifananidzo yacho inoita seinotsikisa runyerekupe, semakamera epamberi, kunyange zvakadaro nyaya yacho ichiisa kumashure makamera. Tichafanira kumirira toona zvinoitika.
17 Ndira 2020: Yakatsanangurwa P40 Pro inopaizadza inotevera-gen Huawei set
Images zvinonzi zveHuawei P40 Pro ratidza musiyano kune iyo inonzi Premium Edition, uchiburitsa pachena kuti Huawei iri kupa mamwe akanyanya-magumo ekupedzisira.
17 Ndira 2020: Huawei P40 Pro Premium Edition leak inoratidza kuburitsa zuva - uye mashanu kumashure kamera!
Leaker supremo Evan Blass akagovana yakakwirira mifananidzo yeiyo Huawei P40 Pro Premium Edition nekusimbiswa kwemhando ye ceramic - uye zuva rekuburitswa.
16 Ndira 2020: Huawei P40 Pro mifananidzo inodonhedza izere nemhando yemidziyo
Mifananidzo inoratidza iyo yakazara mutsara-up ye mavara eiyo Huawei P40 Pro kusvetuka, kuburitsa mashoma mashoma ruzivo.
15 Ndira 2020: Huawei P40 dhizaini inoburitswa, zvichiratidza katatu Leica kamera
Nyowani inoshandura pamusoro inoratidza kubva pane yakajairwa ye nhare mbiri dzeHuawei, iyo P40.
30 Zvita 2019: Huawei P40 Pro renders inoratidza imwe chunky kamera bump
Vatengesi vanoshuma kuva P40 Pro ioneka, vachiuya pamwe nezvimwe zvirevo pamusoro pezvichagadzira kamera pane inozotevera foni yaHuawei.
23 Zvita 2019: Iyo Huawei P40 Pro ingauye ne 10x zoom?
A ripoti kubva kune inowanzo wanda-anoongorora anotsikisa kuti Huawei P40 Pro ichava ne 10x zoom ine 8-megapixel sensor.
20 Zvita 2019: Huawei P40 Pro kamera kuve ne 16-megapixel 10x telephoto
Twitter leaker @UniverseIce yataura kuti iyo P40 Pro ichauya ne10x telephoto lens ine 16-megapixel sensor.
Nzira mbiri dzakasiyana kwazvo
- Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019
18 Kubvumbi 2019: Huawei's P40 uye P40 Pro hop pane rectangular kamera bhendi
Vatengesi vanobva kune yakavimbika sosi ipai nzwisiso mukuumbwa kwese, pamwe nekuwedzera mamwe madhisheni kune iwo ma specs.
18 Zvita 2019: Huawei P40 ichavhurwa munaKurume munaParis, yakasimbiswa
Huawei akadaro yasimbiswa kuti iyo P40 yakatevedzana ichazarurwa pachiitiko muParis muna Kurume 2020.
11 Nyamavhuvhu 2019: Yakatengwa mufananidzo weHuawei P40 inoratidza akakosha kamera bump
An mufananidzo unozviti ndeye Huawei P40 inoratidza nzvimbo yakakura inogona kugara makamera - asi zvakare kuti dhizaini haisi kuchinja zvakanyanya kubva kuP30 Pro.
08 Zvita 2019: Huawei P40 Pro specs inoonekwa, asi tora neine pini yemunyu
Seti ye yakazara seti yezvirevo yeiyo Huawei P40 Pro yaonekwa paWhatsApp, asi kubva kunobva mushe isina kunyatsogadzika mukuvira, saka inofanirwa kurapwa nekungwarira. Mazhinji mafungiro ekufungidzira anoita zvine musoro, asi pane zvishoma zvekugadzirisa chokwadi.
14 Mbudzi 2019: Huawei angatangisa iyo P40 neP40 Pro pakutanga muna2020
A Chirevo kubva kuRuzivo inopa pfungwa kuti Huawei angatarise kuburitsa iyo P40 neP40 Pro pakutanga muna 2020. Zvishandiso zvakapfuura zvakatangwa munaKurume, asi kambani inogona kuunza zvinhu kumberi. Izvi zvinogona kuve kufadza vatengi veChinese.
Huawei P30 Series Kutanga muParis: A Live Blog (Kutanga 2pm CET, 9am ET)
Huawei P30 Pro ongororo: Quad kamera inopwanya makwikwi
Huawei P30 Hands-on: Zvinotora kuderedza 'Pro' moniker
Huawei Inotanga P30 uye P30 Pro: P ndeyeKufananidzo
Huawei P50 Pro Hands-on: Akanaka makamera sekutarisirwa, asi HarmonyOS haina kuchinja zvakawanda